TETIKASA FICOL MAHAJANGA : Miantso fiaraha-miasa amin’ny vahoaka ny Kaominina
Efa nanaovana fanandramana ny herinandro teo ny fiarabe mpitroka maloto ary efa mandeha tsara. 10 avril 2017
Mpiasa dimy no nanaraka fiofanana tany an-drenivohitra amin’ny fampiasana azy io. Hiditra eny anelakelan-trano izy io hanao ny asany ka efa miantso ny vahoaka sahady ny Ben’ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy ny momba ireo fanorenana tsy manara-dalàna ka mibahana ny lalana.
Tsy ho an’ity fiarabe mpitroka maloto ity ihany fa ho an’ireo fiarabe mpamono afo sy ny mpitondra marary ihany koa no ilana ny lalana malalaka. Misy fenitra tsy maintsy arahina mantsy ny fanorenana an-tanàn-dehibe. Tato ho ato dia lasa gaboraraka izany ka hatreny afovoan-dalana misy fanorenana avokoa. Fotoana hanitsiana ny tsy mety ihany koa izao ka ho hita eo ny tohiny.